Gudoomiyaha Barlamaanka Federaalka Jawaari oo Furay Maanta Kalfadhigii Afaraad ee Barlamaanka Jubbaland (dhegayso+Sawiro) – Radio Daljir
Noofember 8, 2017 4:54 g 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta si rasmi ah u furay Kal-Fadhiga Afaraad ee Golaha Shacabka Jubbaland.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka JFS Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Gudoomiye ku xigeenada Aqalka Sare ee JFS Xildhibaano kasocday labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaanada Jubbaland xubno katirsan Xukuumada Sarakiisha Ciidamada iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay furitaanka Kal-Fadhiga Afaraad ee Baarlamaanka Jubbaland.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Khudbad ka jeediyay furitaanka Kal-Fadhiga Baarlamaanka waxaana uu kaga hadlay arimo kala duwan.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in Xildhibaanada Jubbaland ay xaalado adag usoo dhabar adaygeen balse hada ay rajaynayaan in wax walba horay ay usii socdaan.
Waxaa uu sheegay Madaxweynahu in kaalmadii ugu horaysay ee Jubbaland oo dhinaca adeegyada dib u dhiska ah lagu maalgalin doono Aqalka Baarlamanka isla markana Xarun Cusub loo dhisi doono.
Waxaa uu intaas ku daray in Gudoonka labada Aqal ee munaasabadan goob jooga ka ah ay khibrad wadaag la samayn doonon Baarlamaanka Jubbaland isla markana wax badan ay is dhaafsanayaan mudada ay Kismaayo joogan.
Dastuurka Federaalka ah oo ah sharciga kala hagaya hay’adaha Dowliga ah ayuu Madaxweynahu xusay in la ilaaliyo oo laga shaqeeyo sidii loo dhamaystiri lahaa hadii ay taasi dhici waydo ayuu Madaxweynahu xusay in ay arqalada iyo faham la’aanta arintaas ka dhalataa ay dalka dib u dhigayso.
Hay’adaha sharciga ee Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ayuu ku booriyay in ay u midooban sidii darstuurku u noqon lahaa sharci dhamaystiran oo dalka lagu hago.
Hadii xal laga gaaro Khilaafka siyaasiga ah ayuu Madaxweynahu sheegay in ay noqon doonto in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab oo cid walbaa masuuliyad ay ka saran tahay sidii dalka looga xorayn lahaa.
Ugu danbayntii Madaxweynahu wuxuu si rasmi ah u furay Kal-Fadhiga Afaraad ee Golaha Shacabka Jubbaland.
dhegayso codka Khudbadda Madaxweynaha Jubbaland